Apple Fitness+ နှင့် Apple One Premiere ကို လာမည့်အပတ်တွင် ရနိုင်သည် | အိုင်ဖုန်းသတင်း
နောက်အပတ်တွေမှာ အရေးပါလာလိမ့်မယ်။ Apple Fitness + နှင့် Apple One Premiere တို့ ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူ စပိန်၊ မက္ကဆီကိုနှင့် အခြားနိုင်ငံများရှိ Apple ဝန်ဆောင်မှုများတွင် သတင်းများ၊အလွန်မျှော်လင့်ထားသော စာရင်းသွင်းမှုအသစ် နှစ်ခု။
Apple သည် လွန်ခဲ့သည့်တစ်နှစ်က Apple One ကို စာရင်းသွင်းမှု အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးဖြင့် ကြေညာခဲ့ပြီး United States အပြင်ဘက်ရှိ သုံးစွဲသူများစွာအတွက် လက်လှမ်းမမီသော တစ်ခုဖြစ်သော Apple One Premiere။ ၎င်းသည် Apple ဝန်ဆောင်မှုများ (Apple Music၊ Apple Arcade၊ Apple TV +၊ Apple Fitness +၊ Apple News +) ပါ၀င်သည့် “အားလုံး-တစ်အိမ်တည်း” စာရင်းသွင်းမှုဖြစ်သည်။ 2TB နှင့် cloud သိုလှောင်မှုပမာဏ 29,99 ဒေါ်လာ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပတွင် Apple Fitness + နှင့် Apple News + မပါရှိခြင်းကြောင့် ဤစာရင်းသွင်းမှုကို ပထဝီဝင်အနေအထားအရ ကန့်သတ်ထားသော်လည်း ၎င်းသည် လာမည့်အပတ်မှစတင်၍ ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ Apple ပွဲတုန်းက Apple Fitness+ ဟာ စပိန်နဲ့ မက္ကဆီကိုတို့အပြင် တခြားနိုင်ငံတွေကိုပါ ရောက်ရှိလာကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone၊ Apple TV နှင့် iPad တို့မှ ကျွမ်းကျင်သူများက ကျွန်ုပ်တို့၏ Apple Watch မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိန်းသေများကို စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြင့် ဤဝန်ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။ အသွားအလာမရှိဘဲ အချိန်ဇယားမပါဘဲ အိမ်ကနေ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရတာကို နှစ်သက်သူတွေအတွက် အားကစားခန်းမအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုပါ။. ဝန်ဆောင်မှုကို နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်မှ စတင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး Apple Watch ဝယ်ယူသူတိုင်း သုံးလအခမဲ့ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ စျေးနှုန်းက $3 ဖြစ်ပြီး ယူရိုနဲ့ စျေးနှုန်းကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
Apple Fitness + ရောက်ရှိလာခြင်းသည် Apple One Premiere အတွက် တံခါးဖွင့်ပေးထားပြီး လာမည့်အပတ်မှ စတင်၍ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Apple ဝန်ဆောင်မှုများစွာကို အသုံးပြုသူများအတွက်၊ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုစီ၏ ဈေးနှုန်းသည် သီးခြားစီထက် များစွာနိမ့်ကျသောကြောင့် ၎င်းသည် အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ USA မှာ ဈေးနှုန်းက $29,99၊ ၎င်းတွင်ပါဝင်သော ဝန်ဆောင်မှုအားလုံး၏ စျေးနှုန်းကို ထည့်သွင်းပါက (Apple Music $9.99၊ Apple TV + $4.99၊ Apple Arcade $4.99၊ Apple News + $9.99၊ Apple Fitness + $9.99 နှင့် iCloud 2TB $9.99) သက်သာသည် $20. စပိန်နှင့် မက္ကဆီကိုတွင် စျေးနှုန်းများကို ကျွန်ုပ်တို့မသိသော်လည်း ၎င်းတို့သည် အလားတူဖြစ်မည်ဖြစ်ပြီး Apple News + မပါဝင်သော်လည်း (ဤနိုင်ငံများတွင် မရရှိနိုင်ပါ) စုဆောင်းငွေမှာ များပြားနေဆဲဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » NOTICIAS » Apple Fitness+ နှင့် Apple One Premiere တို့ကို လာမည့်အပတ်မှ စတင်၍ ရရှိနိုင်ပါသည်။
လောလောဆယ် ရက်စွဲတွေ မရှိသေးဘူး။
Ted Lasso သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် လူကြည့်အများဆုံး ဇာတ်လမ်းတွဲများထဲသို့ ခိုးဝင်ခဲ့သည်။